Baafata xiqqaa bani. Afaan barruu filatameef fili.
Barruu filatame too'ataa qubeeeffannoo fi mursaa irraa hambisuuf Homaa fili.
Qaaqa dirqaalee baay'ee waliin banuuf Dabala.
Baafat xiqqaa bana. Afaan keewwata ammeef fili.
keewwata too'ata qubeeffannoo fi murfisa irraa hambisuuf Homaa fili.
Qaaqa dirqaalee dabala waliir banuuf Dabala fili.
Baafat xiqqaa bana. Afaan barruu maraaf fili.
Barruu mara too'ata qubeeffannoo fi murfisa irraa hambisuuf Homaa fili.
Barruu chaayinaa filatame sirna barreeffama Chaayinaa tokko irrraa gara birootti hiika. Yoo barruun hin filatamne, galmee hundii hiikameera. Deeggarsaa afaan Eeshiyaa Meeshaalee - Dirqaalee - Qindaa'ina Afaaanii - Afaanota keessaa yoo dandeesse ajaja kana qofa fayyadamuu dandeessa.
Jecha ammee moggoo waliin ykn haala dubbii walitti dhufeenya qabuun bakka buusa.
Fuula caancala Dhangi - Man'eewwanii - Hiriirfamaa bana.
Murfisa banuu fi dhaamsa.
Galmee Jechootaa Karaarraa Dabalataa
Fuula fufaa galmee jechootaa irraa sakatta'I durtii bana.
Title is: Afaan